Joiwo Public Telephone hapetraka ao amin'ny Mustique mooring-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2019-12-19 HITS: 20
Fonenana 1.Robust, vita amin'ny vy mangatsiaka miaraka amin'ny vovoka mifono
4.Magnetika fihodinana vita amin'ny kodiarana volontany.
5.Oho-feo mikasa-manafoana ny mikrô misy
7. Fiarovana porofo IP54.
8.ny loko miloko azo.
9. Ampahany amin'ny finday vita amin'ny telefaona.
10.CE, FCC, RoHS, ISO9001 mifanaraka fampiharana
Ningbo Joiwo explosionproof manokana amin'ny telefaona indostrialy toy ny IP na ny rafitra telefaona analog, telefaona tsy misy toetr'andro, telefaona porofon'ireo fipoahana, telefaona manimba, telefaona maimaimpoana, telefaona ampahibemaso ary telefaona any am-ponja. atmospheres, indostrialy petrrochemical, Tunnel, metro, lalamby, lalamby, ranomasina, sambo, any ivelany, toeram-pitrandrahana, toeram-pamokarana herinaratra, tetezana, hotely, hopitaly, fonja.
Fahatsiarovan'ny Payphone ampahibemaso
Indostrian'ny fifandraisan-davitra any Shina